Tababar loo qabtay 200 oo macaliminta dugsiyada Qur’aanka ah (Sawirro+Video) – Radio Muqdisho
Tababar loo qabtay in ka badan 200 oo macalimiinta Dugsiyada Qur’aanka kariimka ah oo ka kala yimid gobollada dalka iyo qaar ka mid ah wadamada deriska ah ayaa lagu soo gebagebeeyay magaalada Muqdisho.
Tababarkan oo socday muddo Sadex maalmood ah ayaa waxaa soo qaban qaabisay Mu’asasada Ansaarul Qur’aan Kariim ee Soomaaliya, waxaana lagu baranayay sidii loo horumarin lahaa barashada Qur’aanka Kariimka iyo culuunta Diinta Islaamka.
Munaasabadii lagu soo gunaanadayay tababarka oo ka dhacday xarunta Sheekh Cismaan Xidig ee degmada Kaaraan ayaa waxaa ka qeybgalay mas’uuliyiin ka tirsan dowladda, culumaa’udiin iyo marti sharaf kale.
Sheekh Cusmaan Sheekh Cumar Sheekh Daa’uud oo ka mid ah culumaa’udiinka Soomaaliyeed ee ku caan baxay fidinta diinta Islaamka oo mu’asasadiisu bixineysay tababarka ayaa si qota dheer uga hadlay baahida loo qabo horumarinta habka barashada iyo fidinta diinta Islaamka, wuxuuna kula dar daarmay xubnihii loo qabtay tababarka iney bulshada gaarsiiyaan aqoontii ay ka faa’iideen tababarka.
Ku simaha wasiir ku xigeenka wasaaradda Owqaafta iyo arrimaha diinta Yuusuf Xeyle Jimcaale oo isna ka hadlay munaasabadda ayaa sheegay in wasaaraddu dhiirigelineyso tababarrada noocan oo kale ah, wuxuuna hoosta ka xariiqay muhiimadda ay leeyihiin tababarrada noocan oo kale.
War-murtiyeed laga soo saaray kulanka oo ka koobnaa dhowr qodob ayaa waxaa saxaafadda u aqriyay Sheekh Xasan Abuukar Maalin.